Cape Town biyo la'aan ayaa kajirta abaarta | Saadaasha Shabakadda
Abaarta oo ku kordhay saameynta isbedelka cimilada ayaa sababaya taas, Cape Town, Magaalada labaad ee ugu weyn dalka Koonfur Afrika iyo halbowlaha dalxiiska ee wadankaasi, ayaa waxaa loo tirinayaa biyo la’aan.
Haddii dalxiisayaasha iyo dadka deggan Cape Town aysan si weyn u yareyn isticmaalkooda, magaalada ayaa biyo la'aan doonta 12ka Abriil. Waa magaaladii ugu horreysay ee casri ah ee biyo la’aanta. Sideed ugu talo gashay inaad wax uga qabato xaaladda?
1 Maalinta eber
2 Cape Town biyo la’aan
Taariikhda Abriil 12, 2018 waxaa loogu magac daray "Day Zero". Taasi waa taarikhda, haddii aan wax laga beddelin caadooyinka isticmaalka ee dadka deggan iyo dalxiisayaasha, magaaladu biyo la’aan ka dhici doonto. Cape Town waxay leedahay awood dhan 13,5% iyadoo la ogyahay xaalada abaarta ee daran iyo uumiga biyaha ee kordhay ee ay sababeen heerkulka sareeya, xaalufinta biyaha ayaa soo dhow.
Haddii isticmaalka uusan hoos u dhicin, magaalada waxaa lagu qasbi doonaa inay hakad geliso qeybinta biyaha. In kasta oo dadaalladu socdeen, haddana muddadii loo qabtay illaa Day Zero ma aha oo kaliya inay ka sii badan tahay khatarta suurtagalka ah, laakiin way sii gaabinaysay.
Tallaabada ay bilaabeen mas'uuliyiinta aagga si loola dagaallamo dhibaatada abaarta ayaa ah in muwaadiniintu ay cunaan oo keliya ugu badnaan 50 litir qofkiiba maalintii. Tani waa hoos u dhac aad u daran, iyada oo la tixgelinayo in 5 daqiiqo oo qubeys ah ay isticmaasho qiyaastii 100 litir oo biyo ah, sida ay sheegtay WHO.
Abaarta aafada ku habsatay aagga waa dhacdo aan caadi aheyn maadaama aysan ka imaan oo kaliya roob la’aanta oo lagu garto xilli roobaadkii ugu dambeeyay (Abriil-Oktoobar), laakiin sidoo kale xaqiiqda ah in heerka roobka si gaar ah u hooseeyay labadii sano ee la soo dhaafay sidoo kale.
Cape Town biyo la’aan
Saadaasha hawada ayaan ku dhawaaqin roobka illaa Abriil. Mas'uuliyiintu waxay sii hayaan rajo aad u weyn oo ah in roobabkan ay xilli hore imaan doonaan isla markaana ay albaabada u furi doonaan dalxiiska, in kasta oo ay jirto in xilliyada dalxiisyadu aad u sarreeyaan ay ku soo beegmayaan bilaha sannadka ugu qalalan.
Kaliya labo sano kahor, magaaladu waxay isticmaashay 1.200 bilyan oo litir oo biyo ah. Laga bilaabo maanta, isticmaalkaas nus baa laga jaray. Sida laga soo xigtay Tim Harris, oo ah agaasimaha fulinta ee Hay'adda Rasmiga ah ee Dhiirrigelinta Dalxiiska, Ganacsiga iyo Maalgashiga, dhacdadan abaarta daran waxay dhacdaa oo keliya hal jeer kunkii sanadoodba, sidaa darteedna, waxaa lagu sii hagaajiyaa isticmaalka biyaha.
In kasta oo abaaruhu ay ku dhuftaan magaalada, xilliyada dalxiisyadu aad bay u fiicnaayeen. Harris wuxuu hubiyay in xitaa haddii Day Zero yimaado oo qasabadaha ay joojiyaan ka shaqeynta meelaha la deggan yahay, hoteelada ayaa ka mid noqon doona ganacsiyada howlgalkooda la hubin doono
“Oo maxaa ka fiican, waan aragnay jawaab aan caadi aheyn oo ka timid dalxiisayaasha keydinta biyaha. Waxay ku biireen dadaallada xamaasad, waxay ogaadeen inay qayb ka noqon karaan xalka iyagoo ku biiraya dareenka Cape Town, ”ayuu carabka ku adkeeyay Harris.
25.637 milyan oo doolar (qiyaastii 20.615 milyan oo euro) oo gobolku ka soo galay waaxdan sanadkii 2016 (sida ku cad cadadkii 2017 ee warbixinta "UNWTO Panorama ee Dalxiiska Caalamiga"), 7.910 milyan (qiyaastii 6.360 milyan euro). lagu daray iyada oo loo marayo Koonfur Afrika (30,85%).
Dalxiiska Cape Town wuxuu noqonayaa mid soo noqnoqda oo caan ah. 2017, 1,3 milyan oo dalxiisayaal ah ayaa booqday magaalada. Sidoo kale waa in la sheegaa in abaaruhu kaliya ay saameynayaan qaybta Western Cape. Waxa jira meelo badan oo biyo badani ka jiraan.
Sidaad u aragto, abaartu waxay ku dhufaneysaa meelo badan oo adduunka oo dhan ah cawaaqib xumada ugu badanna durba waa dhow tahay. Xalalka sida yareynta isticmaalka biyaha ayaa kaliya ka hortag ah maadaama, hadii uusan roobku ku filneyn, ay tahay waqti in biyihii ka idlaadaan. Sidaa darteed, abuurista siyaasado gacan ka geysanaya maaraynta biyaha ayaa ah muhiimad muhiim ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » Cape Town biyo la’aan ayaa kajirta abaarta